Ciidamada amaanka iyo kuwa sirdoonka Puntland oo fashiliyay qarax miino. – Radio Daljir
Ciidamada amaanka iyo kuwa sirdoonka Puntland oo fashiliyay qarax miino.
Boosaaso, Dec 26 – Ciidamada sirdoonka Puntland ee PIS iyo kuwa amaanka ayaa fashiliyay qarax nooca meelaha fog laga hago oo la dhigay wado muhiim ah oo isku xirta garoonka diyaaradaha ee magaalada Boosaaso iyo isgooyska Gaaca,dhinaca galbeedna ka xigta wadada laamiga ee Boosaaso.
Walxaha oo lagu soo qariyay bacmadow,ayaa waxaa ka werhelay dad shacab ah oo goobta ka dhawaa,kuwaasi oo markii dambe ku wargliyay laamaha amniga ee gobolka Bari,si looga hortago waxyeelo dadka kasoo gaarta qaraxa.
Ciidamada amaanka iyo kuwa sirdoonka Puntland ayaa soo gaaray goobta la dhigay qaraxa,waxaana ay ku guulaysteen inay u qaadaan goob banaan oo dhinaca bari ka xigta magaalada Boosaaso,kuwaasi oo ku guulaystay inay ku qarxiyaan goob aysan dadna ka dhoween.
Ma’ahan markii ugu horaysay oo ay ciidamada amaanka iyo kuwa sirdoonka Puntland ay si wadajir ah ugu guulaysteen fashilinta qaraxyo la doonayay in lagu halaago dad shacab ah oo aan waxba galabsan.